Ogwe osisi ogwe osisi |
Akwụkwọ ọla eji achọ mma
Mpempe allọ Ahịa Iron
Mgbukpo ụlọ rọba
Kpochapụ ogwe osisi
T ranslucent C orrugated R oof P anels PVC Translucent Corrugated Roof panels SMARTROOF bụ ama ama ama ama, nke nwere ọkachamara na Roofing ihe karịrị afọ 10. Ọ bụghị naanị iji melite njirimara nke ịsa ahụ, kamakwa anyị na-enyere aka idozi nrụgide corrosive na mkpuchi nke okpukpu ụlọ …….
Ihe osise PVC Translucent doro anya:
T ranslucent C orrugated R oof P anels PVC Translucent Corrugated Roof panels SMARTROOF bụ ama ama ama ama, nke nwere ọkachamara na Roofing ihe karịrị afọ 10. Ọ bụghị naanị iji melite njirimara nke ịsa ụlọ, kama anyị na-enyekwa aka idozi nrụgide corrosive na mkpuchi nke okpukpu ụlọ maka .......
PVC Translucent Corporateated Roof panels
SMARTROOF bu ihe eji ama ama ama, nke bu aka di na Roofing ihe kariri afo iri. Ọ bụghị naanị iji melite njirimara nke ịsa ahụ, kamakwa anyị na-enyere aka idozi njigide corrosive na mkpuchi nke okpukpo. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu anyị na-eche maka ịdị mma na ọrụ dị oke mkpa, ma raara onwe ha nye inyere enyi niile nọ ụwa niile aka ịchọta ụlọ dị mma.
Ihe PVC Translucent Corporateated Roof panels
Ihe Edebere Raw PVC / plastic
Ihe mkpuchi Mba
Agbakwunyere Nnọchite igwe UV / Stabilizing
Ozo 1130mm / 1360mm
Ozo Dị Irè 1050mm / 1240mm
Ogologo Ahaziri / Standard
Osisi ike 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm
Mpempe akwụkwọ PVC bụ akwa ụlọ dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ngwa dị na ụlọ obibi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana azụmahịa. A na-etinyere ya maka ịnabata ọkụ ka ha wee nwee ike ime ka mbara ahụ na-enwu enwu ma chekwaa ego na ọkụ na ikuku. Enwere ike ịchọta ha ka ejiri ha rụọ ụlọ nkwakọba ihe, osisi, ebe a na-arụ ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ihe ọkụkụ na ihe ndị ọzọ.
Ga - achọ ịma:
1. are bu onye ahia ma obu onye ahia?
--Ọ bụrụ na anyị bụ ndị emeputa! Anyị na-enye gị ọnụahịa mbupu ụlọ ahịa na-enweghị ego dị n'etiti.
2. Kedu ihe ASA?
--ASA (Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer) bụ ụdị ngwaahịa plastik ọhụụ etolite na 1970s. O nwere njiri mara mma dịka akụrụngwa na-arụ ọrụ na nke anụ ahụ, nnukwu ihu igwe na-eguzogide, ịnagide ọnọdụ okpomọkụ dị mma, ịkọwapụta franklinism.
3.Gịnị bụ PVC?
--PVC (Polyvinyl chloride) bụkwa ihe eji ewu ewu na plastik ewu ewu na narị afọ nke 20, ka etinyere ya n'ọtụtụ ọrụ.
4.Are ahia gi eco-friendly?
- Ngwaahịa ụlọ plastik anyị enweghị asbestos, ha anaghị egbu egbu, enweghị ụtọ.
5. Kedu ka oge ịkwụ ụgwọ gị si dị?
- N’oge mbu, ọ ga - abụ T / T 30% n’ihu, ọ ga - akwụ ụgwọ tupu akwụ ụgwọ ya.
6. Kedu otu esi enweta samplets?
-Ma enwere ụdị nlele mgbe ndị ahịa na-ebu ibu.
Nke gara aga: Gbanyụọ Nkịtị
Osote: Lọ Skylight
Igwe ọkụ Skylight
Mpempe akwụkwọ Roofing Skylight
Mpempe akwụkwọ Polycarbonate Multiwall
Mpempe akwụkwọ Mgbukpọ plastik emebila
Ime ụlọ H, 30 / F, Foshan Development Building, No.13, East Hua Yuanrd, Foshan, Guangdong, China